War Deg Deg Ah:-Qaraxyo Lala Eegtay Maqaayad Ku Taal Beydhabo – Radio Muqdisho
Wararka ka imaanaya magaalada Beydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in goor dhaweyd Qaraxyo bahalnimo ah lala eegtay goob dad aad u badan ay ku shaaheynayeen oo ku taala magaalada Beydhabo, iyadoo qaraxyadaasi oo ahaa kuwa ismiidaamin ah ay geysteen khasaarooyin kale duwan.
Goobta qaraxyada lala beegsaday oo ah maqaayad ku taala bartamaha magaalada , halkaasi oo galabtii ay ku shaaheyn jireen dad aad u fara badan.
lama oga khasaaraha dhabta ah oo ay sababeen Qaraxyadaasi naftii la caarinimada ah oo looga bartay argagaxisada Al Shabaab oo caada ka dhigtay beegsiga goobaha dadka shacabka ay isugu yimaadaan maadaama ay ku jabeen weerarada joogtada ah ee Ciidamada qalabka sida ay ku hayaan, taasi oo baaba’u ah kooxdaasi, waxaana soconaya u gurmashada dadka ku waxyeeloobay falkaasi ay cadowtooyada ah.
Bilowgii sanadkani ayay eheyd markii qarax sidaan oo kale lala eegtay maqaayadani oo ay ku geeriyoodeen in kabadan 20-ruux oo aan waxba galabsan.
Wixii Warar ah Ee ku soo kordha warkani waan idiin soo gudbin doonaa insha’allah.
Faah Faahin Ku Saabsan Qasaaraha Qaraxyo Lala Eegtay Maqaayad Ku Taal Beydhabo